Azon'i India atao ve ny mampiadana ny onjan'ny COVID-19 faharoa mahafaty? | Vaovao Mafana momba ny dia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Azon'i India atao ve ny mampiadana ny onjan'ny COVID-19 faharoa mahafaty?
Azon'i India atao ve ny mampiadana ny onjan'ny COVID-19 faharoa mahafaty?
Firenena iray manana olona 1.4 miliara manara-dia an'i Azia sy Moyen Orient dia fandrahonana lehibe rehefa mitifitra ny COVID-19. Izany no toe-javatra mety ho saika India.
India dia manana tranga maherin'ny 11 tapitrisa amin'ny COVID-19 fa mponina efa ho 1.4 miliara.
Na dia areti-mifindra vaovao marobe aza dia mitazona an'i India tsy lavitra amin'ny antontan'isa ambony amin'ireo firenena voa.
Ny atahorana any India dia ny aretina dia mifantoka amin'ny tanàna sy fanjakana sasany.
Amin'izao fotoana izao dia misy tranga 11,686,330 23 ho an'ny COVID notaterina tao anatin'ny taona lasa, raha ny praiminisitra Narendra Modi dia nanidy firenena iray taona lasa izay tamin'ny XNUMX martsa
Androany India dia nanoratra tranga vaovao 40,611 ary 197 ny isan'ny maty ary 160,200 XNUMX no voasoratra anarana ankehitriny.
India dia manana olom-pirenena miisa 1,389,790,186 hatramin'ny androany. Miorina amin'ny isan'ny mponina 8,409 1 amin'ny 125 tapitrisa no voan'ny virus, inona no mametraka an'i India amin'ny isa XNUMX manerantany.
India dia maty 115 tamin'ny iray tapitrisa ary nametraka ity firenena ity amin'ny toerana 118 manerantany.
Miaraka amin'ny fitsapana 168,691 isaky ny tapitrisa India izay isa 114 eto an-tany.
Ny fiheverana ny COVID-19 dia refesina amin'ny firenena 219 Indie ia eo afovoan'ny tsipika fifaninanana mahatsiravina momba ny fahasalamana sy ny fahafatesana.
Miaraka amin'ny vaksiny misy ankehitriny, manam-pahaizana maro no manohana ny ambaratonga lehibe amin'ny fampandehanana vaksiny ataon'ny governemanta hiarovana ireo marefo. Taorian'ny firongatry ny tranga COVID-19 tany Mumbai, Pune, ary ny tanàna hafa, ny antso ho fanitarana ny votoatin'ny programa fanaovana vaksiny dia nihanatanjaka hatrany hatrany.
Miatrika fitsangantsanganana iray hafa indray izao tontolo izao amin'ny fihanaky ity viriosy ity, ary indrisy, mampiseho lalana mitovy amin'izany i India.
Omaly i India dia nandrakitra ny fiakarana avo indrindra amin'ny tranga COVID-19 avo indrindra tao anatin'ny efa-bolana sy tapany farany izay nahitana 46,951 XNUMX ny aretina vaovao.
Ity onja vaovaon'ny COVID-19 any India ity dia vaovao ratsy ary mety hisy fameperana vaovao.
Herintaona taorian'ny nanambaràna ny fanidiana ny coronavirus tamin'ny 23 martsa, ny fandrahonana dia mbola lavitra noho i India izay miaina fitomboan'ny aretina hafa.